के तालु खुइलाउँदा बाक्लो कपाल आउँछ ? थाहा पाउनुस् वास्तविकता | Lek Besika Bhakaharu - Online News Portal
के तालु खुइलाउँदा बाक्लो कपाल आउँछ ? थाहा पाउनुस् वास्तविकता
कपाल झर्नबाट रोक्नका लागि र बाक्लो कपाल पाउनका लागि मानिसहरुले तालु खुइलाउन सल्लाह दिन्छन् । धेरै मानिसहरुलाई लाग्छ कि तालु खुइलाउँदा नयाँ आउने रौं मोटो र बाक्लो हुन्छन् र रेजर लगाउँदा पहिले नभएका ठाउँमा पनि कपाल उम्रिन थाल्छ । तर के वास्तवमा नै यस्तो हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले यो बुझ्न जरुरी छ कि तालु खुइलाउनुको अर्थ कपाललाई काट्नु नै हो । र तपाईंले कपाललाई जसरी काटेपनि यसले त्यसको वृद्धि, लम्बाई र मोटाईमा कुनै फरक पार्दैन । तर यो साँचो हो कि कपाल लामो भएपछि हाँगा पलाउन थाल्छन् जुन काट्दा हामीलाई कपाल बाक्लो भएको महसुस हुन्छ ।
यसबाहेक धेरैलाई लाग्छ कि कपालमा तेल मालिस गर्दा कपाल छिटो बढ्छ र बलियो हुन्छ जबकी यस्तो केही पनि हुँदैन । यदि तपाईं कपाललाई धेरै रगडेर मालिस गर्नुहुन्छ भने तपाईंको कपाल टुट्न सक्छ ।
चायाका कारण कपाल झर्छ भनेर विभिन्न विज्ञापनले देखाउने गर्छन् तर यो पनि वास्तविकता होइन । चायाका कारण तपाईंको कपाल कमजोर भएर टुट्छन्, झर्दैनन् । टुट्नु र झर्नु फरक कुरा हो ।
मानिसहरुमा यो पनि गलत धारणा छ कि हामीले पटक–पटक स्याम्पु परिवर्तन गर्नबाट रोक्नुपर्छ जबकी यसले कपालसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन । स्याम्पु हो, कुनै रक्सी होइन जुन तपाईंको कपाललाई लत लागोस् । यदि तपाईंलाई आफ्नो स्याम्पु परिवर्तन गर्न मन लागेको छ भने आनन्दले चेन्ज गर्नुहोस् ।
यतिमात्र होइन, मानिसहरुलाई लाग्छ कि यदि कन्डिशनरको प्रयोग गरे कपाल झर्न थाल्छ जुन पूर्ण रुपमा बकवास हो । कन्डिशनरले कपाल नरम बनाउँछ लट्टा पर्दैन जसका कारण कपाल कम झर्छ ।
ब्ल्याक टि भर्सेस ब्ल्याक कफीः कुन बढी फाइदाजनक ?
छोडपत्र गरेको श्रीमानसँग सहवास हुन थाल्यो, के गरौं ?